Asal ahaan ereyga Afrika - Afrikhepri Fondation
Talaado, Sebtember 22, 2020
Welcome GARGAARKA DEGDEGA IYO DALKA
Asalka ereyga Afrika
min aqri 4 min
Lmarkii magaca "Afrika" uusan wali jirin, waxaan la hadalnay, inaan tixraacno aagagga dhulkan, Kathiopa, dhulka Itoobiya, dhulka "Cham", "Dhul" Coush "," Sheba " ", D'Alkebulan ... Sida laga soo xigtay taariikhyahan caan ah Ibn Khaldoun, dhulalkaas waxay heleen magaca" IFRIQIYA "(Afrika) ka dib duulaankii mid ka mid ah boqorradii carbeed ee Yemen, kaasoo ku dhashay magaca" Ifriqos bin Qais bin Saifi ", Boqorkaani wuxuu qabsan doonaa dhulalka waqooyiga (Magreb, iwm), wixii markaas ka dambeeyana waxay qaadi doonaan magaca la xiriira, taasi waxaa weeye" Ifriqya "(Afrika). Intaa waxaa sii dheer, sahamiyaha caanka ah Leon the African, ayaa ku sheegay buuggiisa xajmiga sawir-gacmeedka in magaca Afrika loo bixiyay Malek-Afriki, oo ah boqorka Sabéen, markii uu ku soo duulay woqooyiga Afrika (Maghreb current).
- Yurubiyaanka ayaa naga soo wacaya erayga afrikaanka ah ee asalka u ah ereyga Ifriqiya, oo ah qabiil reer Berber ah oo lagu rakibay wakhtigii Roomaanka, oo u dhexeeyay Tunisiya iyo Aljeeriya.
- Carbeed ayaa nagu soo wici kara erayga Suudaan oo micnaheedu yahay Blacks, iyo qaaradeena Alopulan macnaheedu waa kii garanaya sida loo helo.
- Giriiggu waxa uu inoo sheegayaa ereyga Itoobiyaanka ah ee macnihiisu gubtay, iyo ereyga Liibiya wuxuu u jeeday qaaradeena (Herodotus, Taariikhda II, 22 iyo Taariikhda IV 42).
Magaca Africa waxay ka imanaysaa Galbeedka Roomaankii, oo isticmaalay magaca Africa terra - "Dhulka Afri" (jamac ah, ama "Afer") oo u dhiganta - si loogu magacaabo waqooyiga qaaradda, sida gobolka Afrika ee leh Carthage, oo ku xiran Tunisia hadda.
Afri waa qabiil oo ku noolaa waqooyiga Afrika ee gobolka Carthage. Asalka asalka afer waxaa lagu xidhi karaa luqada meel fog Fikrado, oo macnaheedu yahay "ciid". Laakiin aragti ah 1981 ayaa sheegaysa in tani ay ka soo baxayso erayga Berber ifri macneheedu waa "godka", marka loo eego troglodytes (godadka godadka).
- Sida Yuhuudda, waxay na la odhan jiray ereyga Koushim iyo qaaradda Erayga Kush, magacaabay BaKouSou mid ka mid ah dadyowga our Nzadi (Yeremyaah 13: 23 iyo Sefanyaah oo ahaa 3: 10).
Si kastaba ha ahaatee, cutubka 10 ee kitaabka Bilowgii, wuxuu ka soo xigtay saddexda qaar ee loo yaqaano taariikhda hore, waxay na tusinaysaa in magaca qadiimka ah ee qaaradeena uu yahay KaM, oo ka yaraatay KaMa.
Ereyga asalka ah ee "KaMa" wuxuu ku dhexyaalaa dad badan oo ku yaal Bartamaha Afrika iyo Galbeedka Afrika.
Xilligaani wuxuu ka dhaxlay aabayaasheenna waxaa laga heli karaa luqadaha soo socda:
- KaMa micnaheedu waa Black in Coptic,
- iKaMa oo macneheedu yahay Blackened in Mbochi,
- KaMi macnaheedu waa gubasho ku taal Bambara, KéMi macnaheedu waa gubasho Mandongou,
- KeM macnaheedu waa gubasho Wolof,
- Kim ayaa macneheedu yahay gubasho Mossi,
- KeMpou waxaa loola jeedaa Black in Vai,
- KéMatou macnaheedu waa in lagu gubay Mandongouu waxay ku dhowyihiin Masaaridii Masaarida.
Eraygii Masaarida Kama garaaf ahaan wakiil ka goosin ka mid ah qoryo ololaya (dhuxusha) waxaa laga sidoo kale Kala Dhuxul macnaha xagjirka ah ee qaar ka mid ah our luqadaha, sida Kongo, Teke ah, ee Zigoula of Mbati iwm
Laakiin waa ereyga KaMa (KMT) oo ka yimid qaaradeena?
Haa, maxaa yeelay tan iyo markii ay muuqatay qoritaanka hieroglyphic (3400 BC), Masriyiintii hore waxay naftooda uxilsaari jireen erayga KaMtou oo macnaheedu yahay Madoow, maxaa yeelay iyagu. Intaa waxaa sii dheer, waxay isticmaaleen ereyga KaMi ama KeMet (KMT) oo macnaheedu yahay Madoow, kaliya maahan inay u qaabeeyaan dhulkooda, laakiin sidoo kale waxay ku kordhiyaan qaaraddeenna. Suudaan micnaheedu waa "dhulka madowga" halka Itoobiyana macnaheedu yahay "wajiyo gubtay".
Ereyga KaM wuxuu kaloo ku soo baxayaa qorniinka reer Kancaan oo ku taariikhaysan qarnigii 10aad ee BC. J. C, oo magacaya qaaradeena (Stele of Paraiba, Brazil). [Wpdiscuz-feedback id = "h2bbob98az" su'aal = "Maxaad u maleyneysaa?" furay = ”1 ″] [/ wpdiscuz-celin]
Waxaan nahay KAMITES qaaradkeenna waxaa la yiraahdaa KAMA (ama KAMITA)
SOURCE: http://fr.wikipedia.org/wiki/Kama_(Afrique), Hérodote, (Histoire Il, 22 et Histoire IV 42)
Qaramada Midoobay iyo Dhaqanka: Laga soo bilaabo Qarnigii hore Masar Masaarida ilaa dhibaatooyinkii dhaqameed ee maanta Madoowga madow
5 cusub oo ka yimid € 15,20
6 waxaa laga isticmaalay € 13,89
Iibso 15,20 €
laga bilaabo Sebtember 21, 2020 12:37
Taariikhda lagu sii daynayo 2000-07-11T00:00:01Z
Edition Casharkii 4aad
Publication Taariikhda 2000-07-11T00:00:01Z
Mohamed Dia wuxuu soo bandhigay kaadhkiisa horay loogu bixiyay Diacash Mastercard
Diimaha iyo xakamaynta maskaxda
La soco Tani waa annaga (2016)
Waad ku mahadsan tahay gal si ay ugu biiraan wada hadalka